नेता बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ : देशलाई संघीयता खाँचो नै थिएन, द्व’न्द्व व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको हो…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
काठमाडौँ : पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले देशलाई सङ्घीयता आवश्यक नै नभएको बताएका छन् । उनले केवल द्व,न्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयता मान्नु परेको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट देशको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्तिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेपछि यतिबेला उक्त निर्णयको विरोध भइरहेको छ । सोही पृष्ठिभूमिमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । गत कार्तिक ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय भएको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न मातहत निकायमा परिपत्र जारी गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘सङ्घीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम।यस्मा चै के प्रतिगमन भएछ हँ ? प्रदेशहरु खारेज भएको त छैन।
द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको न हो देशलाई खाँचो त थिएन सङ्घीयता। लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलवार घुमाउने भएछन। कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के ! सङ्घीय गणतन्त्र राजनीतिक ब्यवस्था अनि नेपाल देशकाे नाम।
यस्मा चै के प्रतिगमन भएछ हँ?प्रदेशहरु खारेज भएकाे त छैन।द्व,न्द ब्यवस्थापनकाे लागि मान्दिनु परेकाे न हाे देशलाई खाँचाे त थिएन सङ्घीयता।ल,फडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तलवार घुमाउने भएछन।
कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने के! कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्न भनिएको छ । यस्तै अङ्ग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनईपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
Prevमनोज गजुरेल आईसीयूमा हुँदा पूर्वपत्नी मीना ढकालको मनछुने पत्र…उनि भन्छी अहिले पनि उत्तीकै माया गर्छु !
Nextप्रचण्डसंग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने बाबुराम भट्टराईको यस्तो प्रस्ताव…हेर्नुहोस् ।